Wararkii ugu Danbeeyey Dagaalka Galgaduud: Waraysiyo Guddoomiyayaasha Dhabbad & Gelinsoor – Radio Daljir
Wararkii ugu Danbeeyey Dagaalka Galgaduud: Waraysiyo Guddoomiyayaasha Dhabbad & Gelinsoor
Juunyo 3, 2017 8:50 g 0
Xogta Dagaalka degaanka Argeegle (waraysida hoos arag)
Dagaal u dhaxeeyay xoolodhaqato hubaysan oo ku kala abtirsada beelaha deegaanada Dhabbad iyo Gelinsoor ayaa maanta mar kale ka qarxay deegaanka Argeegle oo dhaca xuduuda Itoobiya, hoostagana deegaanka Gelinsoor.
Inta la xaqiijiyay dagaalka oo bilaawday saakay waaberigii hore socdayna illaa iyo duhurnimadii maanta waxaa ku dhintay 4 ruux. Lama hubo waxa uu salka ku hayo dagaalku hase yeeshee beelaha maleeshiyaadka ayaa ah kuwo muddo badan colaadooda ay soo jiitamaysay.
Gudoomiyayaasha deegaanada Gelinsoor iyo Dhabbad oo u waramay Radio Daljir ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay dagaalka maanta.
Halkan ka dhegayso waraysiga Guddoomiyaha Dhabbad
Guddoomiyaha Gelinsoor, Cali Saciid Axmed Cabdulle, ayaa sheegay in maleeshiyaad hubeysan oo ka yimid dhanka Degaanka Saaxo waa sida uu hadalka u yiri e ay dileen 3 nin oo ah reer guuraaga deegaanka Argeegle, islamarkaana ay jir dileen dhowr haween.
Guddoomiye Cali Siciid ayaa dhacdada Dagaalka uga waramay Wariye Cumar Lakiman oo ku sugan istudiyaha Radio Daljir ee Caabudwaaq.
Dhinaca kale waxaa isna Daljir u waramay Guddoomiyaha Deegaanka Dhabbad ee isla Gobolka Galgaduud.
Aadan Cabdi Nuur Galaal “Aadan Gebi” ayaa sheegay in dagaalka maanta uu yahay mid ka dhacay gudaha Itoobiya isla markaana aysan shaqo ku lahayn beelaha dega ama ku abtirsada deegaanka Dhabbad.
Waxa uu waxba kama jiraan ku tilmaamay in dagaalka uu u dhaxeeyay beelo ka soo kala jeeda Dhabbad iyo Gelinsoor.
Guddoomiye Aadan Gebi wuxuu qadka teleefanka ugu waramay Cumar Lakiman.
Halkan ka dhegayso waraysiga Guddoomiyaha Gelinsoor